English & Myanmar Typing Tutor
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ Typing tutor အတွက် တောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေ ရှိတဲ့အတွက် နောက်တစ်မျိုး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် typing tutor အသစ်တစ်ခု ထပ်လုပ်မလို့ပါပဲ. ဒါပေမယ့် အချိန်မအားတာနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေ ကြောင့်မို့ မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေပါတယ်. အခုကတော့ ရှိပြီးသား လူများလည်း ရှိကြမှာပါ. မရှိတဲ့သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ.
Download ifile | Mediafire | Minus | Mirrorcreator